''साउनमा हरियो चुरा लगाउँदा चिताएको पुग्छ भन्छन्, मैले पनि लगाएँ''
धनुषा - धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ महेन्द्रनगरकी मनिषा रौनियारले साउनको पहिलो दिन दुवै हातमा हरियो चुरा लगाइन्। मिथिला नपा–४ ढल्केवरकी अनु खनाल र महेन्द्रनगरकी सुशीला कार्कीले चुरासँगै हातमा मेहन्दी लगाएर सजिइन । यतिबेला प्रायजसो सबै युवती र महिलाको नाडीमा काँचका हरिया चुरा सजिएको देख्न पाइन्छ । साउन लागेलगत्तै हिन्दू महिलामा छुट्टै उत्साह र उमंग छाएको छ । रातो, पहेँलो र हरियो चुरापोते तथा कपडामा सजिएका महिलाको मन्दिर र बाटोघाटोमा चहलपहल देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा किशोरीमा समेत मेहन्दी र हरियो चुरा लगाउने ‘क्रेज’ बढेको छ । धेरैले धार्मिक ...
विश्वकप खेल चलिरहँदा पत्रकारलाई किस गर्न खोजेपछि…
एजेन्सी - रुसबाट विश्वकपबारे टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै गर्दा आफूलाई चुम्बन गर्न आउने एक व्यक्तिको ब्राजिलकी एक पत्रकारले सशक्त प्रतिकार गरेकी छन् । आइतवार जापान र सेनेगलको खेल हुँदा जुलिया गिमारइस एकाटरिन्बर्गमा थिइन्। टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा नै उनलाई ती अपरिचित व्यक्तिले चुम्बन गर्न खोजेका थिए । त्यस्तो प्रयासबाट आफूलाई जोगाउँदै गिमारइसले ती व्यक्तिलाई झपारिन् । “यस्तो नगर्नुहोस् ! यस्तो फेरि कहिल्यै पनि नगर्नुहोस् । ओके!” भनेर उनी चिच्याएपछि ती व्यक्तिले क्षमायाचना गरेको भिडिओमा सुनिन्छ । उनले “म तपाईँलाई त्यस्तो गर्ने अनुमति दिन्नँ……। यो शिष्ट छैन, यो उचित छैन ...
बच्चाले ओछ्यानमा पिसाब फेरेर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय !
एजेन्सी - प्रायजसो आमाबाबुलाई आफ्ना बच्चाहरूले बिस्तारामा पिसाब गर्ने कुरालाई लिएर चिन्ता हुने गर्छ । बच्चा ठुला भएपनि उनीहरु बिस्तारामा पिसाब गर्न छाड्दैनन् भने यो अभिभावकले सोँच्नुपर्ने कुरा हो । यदि तपाईले चाहानुभयो भने यो समस्यालाई कैयौँ तरिकाबाट रोक्न सक्नुहुन्छ । जस्तो, उसलाई रातको करिब १–२ बजेतीर बिस्तारै जगाएर बाथरुममा लैजानुहोस् र पिसाब गर्नको लागी प्रेरीत गर्नुहोस् । बच्चालाई बानी लगाउनुहोस् की उ सुत्नुभन्दा पहिले पिसाब गरोस् । साथै रातमा ८ बजे पछाडी उसलाई पानी पिउन नदिनुहोस् । यदि कुनै समय बच्चा चाँडै नै ...
पानि : तातो या चिसो पिउनु ठिक ?
एजेन्सी - पानी हाम्रो दैनिक उपयोगी तथा अपरिहार्य चिज हो । पानी बिना जिन्दगीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । हाम्रो शरिरको ७० प्रतिशत भाग पानीबाट बनेको हुन्छ । तपाइले पानी पिउने समयमा पानीको तापक्रममा कत्तिको ध्यान दिनुहुन्छ ? ? हामीमध्ये धेरै चिसो पानी पिउछौँ, के यो स्वास्थ्यको लागी फाइदाजनक छ ? एक हेल्थ म्यागजिनमा प्रकाशित भएको रिपोर्टका अनुसार ८० देखि १०६ डिग्री फरेनहाइट सम्मको पानी शरिरको लागी हानिकारक हुन्छ । यसले गर्दा तपाई बिरामी हुन सक्नुहुन्छ । चिसो पानीको कारण इम्युन सिस्टमको कार्यक्षमता कम हुन्छ । ...
सेक्स पावर बढाउने हो ? अपनाउनुहोस यस्तो उपाय !
एजेन्सी - हालै बेलायतमा गरिएको एक अनुसन्धानका अनुसार १५ दिनसम्म अनारको जुस खाने व्यक्तिको यौनच्छा भनेसम्मको हुन्छ । एडिनवर्गराज्यको क्वीन मारग्रेट विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले सेक्सपावर बढाउने बिषयमा गरेको अनुसन्धान गरेका थिए । सो क्रममा कमजोर भनिएका केही पुरुष तथा महिलालाई राखी १५ दिन सम्म दिनहु एक गिलास अनारको जुस खुवाएका थिए । १५ दिन खाएको जुसले उनीहरुमा टेस्टोस्टेरोन हार्मेनका स्तर निकै बढ्यो । जव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ्यो , कमजोर ठानिएका पुरुष तथा महिलाहरुले एकाएक उत्कृष्ठ ढंगले यौनव्यवहार देखाउन थाले । विश्वविद्यालयका अनुसार यो अनुसन्धानमा २१ देखी ६४ ...
के हो सेक्स एडिक्सन ? यौनेच्छा नियन्त्रणभन्दा बाहिर गए के हुन्छ ?
एजेन्सी - कुनै पनि कुराको लत लग्नु राम्रो हैन। चाहे त्यो रक्सीको होस् चुरोट खैनीको होस् या अन्य कुनै कुराको लत यसले मानिसको सामाजिक र व्यक्तिगत जीवनलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। लत जेको पनि हुन् सक्छ र कतिपय मान्छेमा सेक्सको पनि लत हुन्छ भन्ने सुन्दा तपाईं-हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। सामान्यतयाः ‘सेक्स एडिक्सन’ या ‘यौनको लत’को बारेमा मानिसहरू खुलेर कुरा गर्न रुचाउन्नन। तर यस्तो प्रकारको लत लागेका मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन नै तहस नहस पारिदिन सक्छ। के हो त सेक्स एडिक्सन? सेक्स एडिक्सन एउटा गम्भीर मनोवैज्ञानिक समस्या हो। यौनेच्छा ...
मायामा धोका भयो ? पीडा भुल्न यसो गर्नुहोस् !
जब मायामा धोका पाइन्छ तब मान्छेको मन टुट्छ। उसको मन कुनै काममा लाग्दैन । भित्रभित्र जल र पीडा हुन्छ । संसार निरस लाग्न थाल्छ । र, ज्यानमा उत्साह अन्त्य हुन्छ । त्यसैले यहाँ केही यस्ता टिप्स उल्लेख गरिँदैछ, जुन ब्रेकअपपछिको पीडाबाट बाहिर आउन सहयोग पुग्नेछ । कुनै आफन्तसँग कुरा गर्नुस् ब्रेकअपपछि कसैसँग कुरा गर्ने मन हुँदैन। तर कुनै यस्तो व्यक्तिसँग गर्नुस्, जसले तपाईलाई बुझ्न सक्दछ । त्यसबाट तपाईलाई शान्ति प्राप्त हुनेछ । जोसँग पनि मन लाग्छ ब्रेकअपका बारेमा खुलेर कुरा गर्नुस् । साथीहरुसँग घुम्नुस अब तपाई फ्री हुनुहुन्छ । ...